Parental Control - Screen Time & Location Tracker 3.11.23 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.11.23 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Parental Control - Screen Time & Location Tracker
Parental Control - Screen Time & Location Tracker ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Screen Time isafree to use parental control app that helps parents manage and control the amount of time their kids spend on smartphones (Android & iPhone) and tablets (Android and iPad). Additionally Screen Time Parental Controls provides robust web filtering and Location Tracking for your children.
Important parental control aspects including: manage screen time for kids, block specific apps, approve new apps, block certain times of day (e.g. bedtime) and reward extra time for good behavior!
Web Filtering - block web site content inappropriate for your children's screen.
The best Android Parental Control Screen Time app for all devices! Monitor and control screen time on Android devices, Apple iOS devices (iPhone & iPad) and Amazon Kindle Fire devices.
Free Parental Control App - Monitor your child’s device time
▪ Monitor and control just how much time your kids are spending on their smart devices… from the convenience of your own smartphone
▪ See which specific apps are being used and for how long
▪ Receiveanotification when your kids try and installanew app
Best Parental Control App - Manage your child’s device time and more
Premium Version parental control features:
▪ Control & block certain apps at certain times of day
▪ Control & block all activity when it is time to go to bed
▪ Restrict screen activity during school hours or specific times
▪ See exactly where your children are with Location Tracking
▪ With our monthly,6monthly or annual subscription, you can manage all your kids and all their devices. Complete screen time & parental control all one price.
▪ You can share the management with other parents or grandparents as you wish to maximize the effectiveness of the parental control features.
All new users will geta14 day free trial of the Premium version. There is no obligation to go Premium and no need to provide any payment details until you decide to go Premium.
Screen Time Parental Control Help: https://screentimelabs.com/help
Screen Time Parental Control Contact: https://screentimelabs.com/contact
Screen ကိုအချိန်မိဘထိန်းချုပ်ရေး App ကိုနှင့်တည်နေရာ Tracker
မျက်နှာပြင်အချိန်မိဘများစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လေးတွေစမတ်ဖုန်း (Android မှာ & iPhone ကို) နှင့်တက်ဘလက်များ (Android နဲ့အိုင်ပက်) အပေါ်ဖြုန်းအချိန်ပမာဏကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီပေးသည်ကြောင်းမိဘထိန်းချုပ်မှု app ကိုသုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Screen ကိုအချိန်မိဘအုပ်ထိန်းသူထိန်းချုပ်မှုများသင်တို့၏သားသမီးများအတွက်ကြံ့ခိုင်က်ဘ်ဆိုက် filtering နှင့်တည်နေရာခြေရာကောက်ပေးပါသည်။
, ကလေးတွေများအတွက်မျက်နှာပြင်အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲပိတ်ပင်တားဆီးမှုတိကျတဲ့ apps များအသစ် app များကိုအတည်ပြု, နေ့အချို့ကြိမ် (ဥပမာအိပ်ရာဝင်ချိန်) ပိတ်ဆို့နှင့်ကောင်းသောအပြုအမူများအတွက်အပိုဆောင်းအချိန်ဆုချ: အပါအဝင်အရေးကြီးမိဘထိန်းချုပ်မှုရှုထောင့်!
Web ကို Filtering - သင့်သားသမီးရဲ့မျက်နှာပြင်များအတွက်မသင့်လျော်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကို web site ကိုအကြောင်းအရာ။
အားလုံး device များအတွက်အကောင်းဆုံး Android ကိုမိဘအုပ်ထိန်းသူထိန်းချုပ်ရေးမျက်နှာပြင်အချိန် app ကို! Android ထုတ်ကုန်ကို Apple က iOS devices တွေကို (iPhone ကို & အိုင်ပက်) နှင့် Amazon Kindle Fire ကိရိယာများပေါ်တွင်မျက်နှာပြင်အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်။
အခမဲ့မိဘထိန်းချုပ်ရေး App ကို - သင့်ကလေး၏ device ကိုအချိန် Monitor
သင့်ရဲ့ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စမတ်ကိရိယာများပေါ်တွင်ဖြုန်းနေကြတယ်ရုံမည်မျှအချိန် ... သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမတ်ဖုန်းများ၏အဆင်ပြေထံမှ▪ု့ကပ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှု
▪တိကျတဲ့ apps များအသုံးပြုသောလျက်ရှိသည်ရာကိုကြည့်ပါနှင့်မည်သို့ရှည်လျားများအတွက်
သင့်ရဲ့ကလေးတွေနေတဲ့ app သစ်ကြိုးစား install လုပ်သည့်အခါ▪သတိပေးချက်တစ်ခုလက်ခံ
အကောင်းဆုံးမိဘထိန်းချုပ်ရေး App ကို - သင့်ကလေး၏ device ကိုအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပိုပြီး
ပရီမီယံဗားရှင်းမိဘထိန်းချုပ်မှု features တွေ:
▪သင့်လေးတွေ '' မျက်နှာပြင်သည်အချိန်တိကျတဲ့နေ့စဉ်အချိန်ကန့်သတ် Set
▪ခဏခလုတ်များ၏တွန်းအားပေးမှာသင့်ရဲ့ကလေးတွေ '' devices များခေတ္တရပ်တန့်ပြီး
ထိုနေ့၏အချို့သောအချိန်များတွင်▪ထိန်းချုပ်ရေး & ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအချို့သော apps များ
▪ထိန်းချုပ်ရေး & ကြောင့်အိပ်ရာဝင်ဖို့အချိန်အခါလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုပိတ်ဆို့
▪ Block (သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုပါ) က Web Filtering နှင့်အတူတိကျသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့မဟုတ်တပြင်လုံးကိုအမျိုးအစား
▪ဒါကြောင့်သူတို့နောက်ထပ် screen ကိုအချိန်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်ပြီးစီးရန်သင့်လေးတွေတာဝန်များကို Set
▪ကျွန်တော်တို့ရဲ့လစဉ်,6လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းနှင့်အတူ, သင်တို့ရှိသမျှကိုသင့်လေးတွေအပေါင်းတို့နှင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါ။ အားလုံးတဦးတည်းစျေးနှုန်းမျက်နှာပြင်အချိန် & မိဘထိန်းချုပ်မှု complete ။
သင်မိဘထိန်းချုပ်မှု features တွေ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဆန္ဒရှိအဖြစ်▪သင်တို့သည်အခြားမိဘများသို့မဟုတ်အဘိုးအဘွားနှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲမှုမျှဝေနိုင်ပါသည်။
အားလုံးအသစ်ကအသုံးပြုသူများပရီမီယံဗားရှင်း 14 နေ့ကအခမဲ့အစမ်းရပါလိမ့်မယ်။ ပရီမီယံနှင့်သင်ပရီမီယံသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ချိန်အထိမည်သည့်ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမလိုအပ်သွားကြဖို့မျှတာဝန်ရှိပါသည်။
Screen ကိုအချိန်မိဘထိန်းချုပ်ရေး အကူအညီ: https://screentimelabs.com/help
Screen ကိုအချိန်မိဘထိန်းချုပ်ရေးဆက်သွယ်ရန်: https://screentimelabs.com/contact
Parental Control - Screen Time & Location Tracker အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Parental Control - Screen Time & Location Tracker အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Parental Control - Screen Time & Location Tracker အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Parental Control - Screen Time & Location Tracker အား အခ်က္ျပပါ
d0ss စတိုး 32.7k 6.74M
Parental Control - Screen Time & Location Tracker ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Parental Control - Screen Time & Location Tracker အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.11.23
ထုတ်လုပ်သူ Screen Time Labs
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://screentimelabs.com/privacy
App Name: Parental Control - Screen Time & Location Tracker
Release date: 2019-08-13 02:41:42
လက်မှတ် SHA1: 7B:87:15:68:07:36:B4:98:BF:42:E9:25:8C:A9:E7:AB:54:AD:2D:4D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Steve Vangasse
အဖွဲ့အစည်း (O): Screen Time
နယ်မြေ (L): Bristol
နိုင်ငံ (C): UK
Parental Control - Screen Time & Location Tracker APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ